News Archives - San Thitsa
Zawgyi မန်းတလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးတွင် ကလေးခိုးမှုဖြစ်ပွား ယနေ့18.4.2022 နေ့လည်၁၂ဝန်းကျင်လောက်က မန်းတလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးတွင် ကလေးခိုးသွားပါသဖြင့် တွေ့လျှင်အကြောင်းကြားဆက်သွယ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည် အသက် 3နှစ်လောက်ဘဲရှိပါအုံးမည် 09-784747860 09-759884755 သို့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည် ကလေးအား ခိုးသွားသောသူများ ကလေးခိုးသွားသောသူများ ကလေးအား ဘာမှမလုပ်ဘဲ ကလေးအားပြန်ပေးပါလို့
၃၀ ရက်နေ့က ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးရတနာဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကြီး
Zawgyi ၃၀ ရက်နေ့က ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးရတနာဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကြီး ကျွန်မလိုမျိုး မခံရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာပါ။ကျွန်မ 26. 1. 2022 ရက်နေ့က လှည်းတန်း စိန်ဂေဟာ မျက်စောင်းထိုး ဇမ္မူထွန်းစိန်ရွှေရတနာဆိုင်မှာ ပုံပါ စိန်နားကပ် 1350000
ထိုးနှံခံချင်တိုင်း ထိုးနှံပေးလေ့မရှိတဲ့ ခြေစောင့်ဘီလူးမှော် အကြောင်း
Zawgyi ထိုးနှံခံချင်တိုင်း ထိုးနှံပေးလေ့မရှိတဲ့ ခြေစောင့်ဘီလူးမှော် အကြောင်း ခြေစောင့်ဘီလူးမှော် ခြေစောင့်ဘီလူးပညာသည် ဘီလူးကိုခြေစောင့်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ခြေစောင့်ဘီလူးဆေးနှင့် အပ်နှံထိုးနှံခြင်းသည်သာ အဓိကကျလေသည်။ဘီလူးကိုခြေစောင့်ထားရာ၌ ပေါရိသာဒကို ခြေစောင့်ထားခြင်း၊ ပုဏ္ဏကကို ခြေစောင့်ထားခြင်း၊ အာဠာဝကကို ခြေစောင့်ထားခြင်း၊ ဘုမ္မာဒေဝါကို ခြေစောင့်ထားခြင်း၊ ထိုကဲ့သို့
“ဒီလောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကြီးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ တုတ်ထိုး တစ်ချောင်းကို ၅၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ အဘကို အားပေးကြပါဦး”
Zawgyi “ဒီလောက်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကြီးနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ တုတ်ထိုး တစ်ချောင်းကို ၅၀ ကျပ်နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ အဘကို အားပေးကြပါဦး” လွည်းနဲ့တွန်းပြီး နေရာအစုံ လိုက်ရောင်းနေတဲ့ ရွားရွားပါးပါး (၅၀) ကျပ်တန် တုတ်ထိုး အဘ.. မအူပင်မြို့ ၊
မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်မယ့် ဒေသများ
Zawgyi မတ်လ(၂၂)ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်မယ့် ဒေသများ (အားလုံးသိအောင် ရှယ်ပေးကြပါ) Breaking news ဧရာဝတီ မုန်တိုင်းဝင်မယ် ၂၀၂၂ မတ်လ ၂၂ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းတွင် ဧရာဝတီတိုင်း အနောက်တောင်ပိုင်း မော်တင် ဟိုင်းကြီးကျွန်းလပွတ္တာ ငပုတော
ဟော့ပေါ့အိုးထဲတွင် သုံးပြီးသားကွန်ဒုံးကြီးပါလာခဲ့လို့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ကံအဆိုးဆုံး အမျိုးသား
Zawgyi ဟော့ပေါ့အိုးထဲတွင် သုံးပြီးသားကွန်ဒုံးကြီးပါလာခဲ့လို့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကိုတရားစွဲခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ကံအဆိုးဆုံး အမျိုးသား အစားအသောက်တစ်ခုတွင် ပထမဦးစားပေးရမည့် အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဟာ သန့်ရှင်းမှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတို့အတွက် သန့်ရှင်းလတ်ဆတ်မှုရှိမှသာ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်စွာဖြင့် စိတ်ချမ်းသာစွာ စားသုံးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုတွင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံမှ နာမည်ကြီး ဟော့ပေါ့ဆိုင်တစ်ခုဟာ သန့်ရှင်းမှုကို
Zawgyi တစ်အိမ်လုံးအတွက် ဆိုလာဆင်ပြီး (၂၄)နာရီ လျှပ်စစ်မီးသုံးနေသူတစ်ဦးရဲ့အတွေ့အကြုံလေး မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်တည်းက တပ်ဖို့ စဉ်းစားခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကမှ လက်တွေ့တပ်ဖြစ်တော့ သုံးရတဲ့ အတွေ့အကြုံကို user တစ်ယောက်အနေနဲ့ sharing
အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ရေနုတ်မြောင်းထဲမှ ထူးဆန်းစွာစားအုန်းဆီတွေ စီးဆင်းလာလို့ ပြည်သူတချို့ လာရောက်ခပ်ယူနေကြ
Zawgyi ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်မှာ ရေနုတ်မြောင်းထဲ စားအုန်းဆီတွေ စီးဆင်းလာနေလို့ ပြည်သူတချို့ ခပ်ယူနေကြတာ ရေသန့်ဗူးကြီး၊ ရေသုံးဇလားကြီးတွေနဲ့ အပြည့်ရရှိနေကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။ ဒီနေ့ မတ်လ ၁၂ ရက် မနက်ပိုင်းမှာ စားအုန်းဆီတွေဟာ ရေနုတ်မြောင်းထဲကနေ
စပါးများရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ကောက်ရိုးများဖြင့် အနုပညာလက်ရာများ ဖန်တီးခဲ့သောအမျိုးသား နိုင်ငံတကာ အနုပညာ လက်ရာပြပွဲတွင် ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရ
Zawgyi စပါးများရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ကောက်ရိုးများဖြင့် အနုပညာလက်ရာများ ဖန်တီးခဲ့သောအမျိုးသား နိုင်ငံတကာ အနုပညာ လက်ရာပြပွဲတွင် ဂုဏ်ပြုခံခဲ့ရ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရိုးရာအလိုက် မတူညီသော ပျော်ပွဲရွင်ပွဲများစွာရှိကြပြီး နိုင်ငံတိုင်းတွင် အနုပညာလက်ရာများစွာ ထွန်းကားတည်ရှိနေပေသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှ လယ်သမားတစ်ဦးဖန်တီးထားသော အနုပညာလက်ရာများမှာ အလွန်သေသပ်ကောင်းမွန်လှသောကြောင့်နိုင်ငံတကာကပင်
အမျိုးသမီးများနေ့မှာ ဇနီးအတွက် ရွှေအပြား ၁၀၀ ပါတဲ့ ရွှေပန်းစည်းကို ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အမျိုးသား
Zawgyi အမျိုးသမီးများနေ့မှာ ဇနီးအတွက် ရွှေအပြား ၁၀၀ ပါတဲ့ ရွှေပန်းစည်းကို ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ အမျိုးသား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်တဲ့ မတ်လ ၈ ရက်က အလွန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်သောကြောင့် ခင်ပွန်းသည်များက သူ့တို့ရဲ့ဇနီးတွေကို အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝတဲ့ လက်ဆောင်များကို ပေးဆောင်ရန်